Yakawanda Sei Zvemukati Zvinogadzirwa Pamhepo mumasekondi makumi matanhatu? | Martech Zone
kunyanyaUngave wakacherekedza huremu mukutumira kwangu kwazvino. Nepo kuburitsa zuva nezuva kwave chikamu cheDNA yangu mumakore achangopfuura, ndiri zvakare kupokana nekusimudzira saiti uye nekupa akawanda uye akawanda maficha. Nezuro, semuenzaniso, ini ndakaenderera mberi neprojekti yekubatanidza akakodzera machena mapepa kune ino saiti. Icho chirongwa chandakachengetera rinenge gore rapfuura uye saka ndakatora nguva yangu yekunyora ndikaichinja ikaita nguva yekunyora.
Wakandisuwa here? Zvingangodaro kwete… kune toni yezvekushandisa kunze uko kutsikisa zvinoshamisa zvemukati. Ini handisi pasi pekunyepedzera kuti ndinoratidzika seakanakisa - ndinongoda kugovana zvandakawana nekubatsira kudzidzisa avo imi vakanyorera nekutevera bhurogu yangu kuti murambe muchikupai ruzivo rwezvishandiso neruzivo pamhepo izvo zvandinoona, kutsvagisa , uye dzidza nezve.
Izvo zvakati, huwandu hweruzha rwakagadzirwa ruri kungovhara ... uye harisi kuwana zvirinani. Ivo vanhu vari Moz yakaita ongororo yezvinyorwa zvemukati neBuzzSumo ndikawana:
Ruzhinji rwe Zvinyorwa zvine chekuita nebhizinesi rakaburitswa gashira mashoma masheya uye kunyangwe mashoma ma link, mazhinji asingasviki maviri ekubatana paFacebook.
Vanopfuura hafu yezvose maTweets ane chekuita nebhizinesi yakanga iine zvikamu gumi nesere kana zvishoma. Ndine chokwadi chekuti izvi zvinoitika nekuda kwehunhu hwevashandisi veTwitter, asi zvichiri kunongedza kuyedza pasina kudzoka nemakambani.
Vanopfuura makumi manomwe neshanu muzana emabhizimusi mbiru vaive nazvo zero zvekunze zvinongedzo saka kana chinangwa ichi chaive chekutora organic yekutsvaga… ruzhinji rwemabhizinesi rwuri kukundikana zvinosiririsa pakuwana organic organic.
85% yezvinyorwa zvakanyorwa aive nemazwi asingasviki chiuru kunyangwe zvakadaro pamusoro pemashoko chiuru inogara ichigamuchira zvimwe zvikamu uye zvinongedzo.
Iyo Nyaya YeZvishoma Zvemukati
Pakutanga gore rino, isu takaparura chirongwa chepamhepo che kudzora zvipembenene kambani pano muIndipolis. Zano ravo rapfuura raive rechinyakare plethora yenzvimbo dzakawanda nezviuru zvemukati, kiyi-rakapfuma mapeji. Waive muchina wemukati wakamhanya kwemwedzi kuyedza kubiridzira maalgorithms… uye haina kushanda. Iyo saiti yakasvetuka mumatanho ichibva yadonha kusvika panogona kuwanikwa chaizvo muindekisi.
Isu takaongorora ese makambani enharaunda uye chero zvakabatanidzwa zvemukati zvavakagadzira online kuti vawane akakwirira masosi kubva kune edu nyowani mutengi. Isu takatendeka takawana toni yezvinyorwa kunze uko - asi mashoma mashoma anoshamisa kana akazara mapeji. Panzvimbo pekuwedzera ruzha, takatsvaga pane imwe nhaurwa panguva uye ndokugadzira raibhurari yezviri mukati pests izvo zvakanyorwa nekuseka, zvaisanganisira matani ezvekuona, uye isu takatanga kuburitsa infographics uye zvinyorwa zvekutarisa zvesaiti.
Mhedzisiro yacho ndeyekuti, mukati memwedzi, saiti inotonga masosi. Raive basa rakaomarara uye zvirimo zvaidya nguva uye zvinodhura… asi mhedzisiro yacho ndeyekuti yaishanda. Kuderera zvemukati zvinogona kuburitsa mukuru mhedzisiro yebhizinesi kana iko kuyedzwa kwaiswa mairi.
Sezvo iwe paunotarisa kune ino infographic uye uchiona maitiro ezvisikwa zvemukati mukati meminiti imwe pawebhu pamusoro pemakore mashoma apfuura, pane mukana unoshamisa. Gadzira zvinoshamisa zvemukati uye zvako kugutsikana kuchava mambo pakati pawns.
Yedu '60 masekondi 'infographic inoona zvinoitika muminiti imwe chete pawebhu. Kuwanda kwekutsvaga kweGoogle, zvakatumirwa paFacebook uye mameseji eWhatsApp anotumirwa mumasekondi makumi matanhatu chete ndeechokwadi! Kutanga kuburitswa gore rapfuura, isu ikozvino tavandudza iyo yegore ra60, ichiratidza huwandu hwemakore matatu apfuura. Robert Allen, Akangwara Insights.
Chii Chinoitika Pamhepo muMiniti Imwe?
Tags: 20142015201660 masekondizvemukati zvakagadzirwazvemukati zvinoitikaemail vhoriyamu pagorenamaemail anotumirwa muminiti imweFacebookfacebook postsgoogle kutsvaga paminitimaawa ezvinyorwainfographicinstagram paminitiLinkedInmameseji akatumirwamineti imwezvinyorwa zvakabudiswaevanhu vezvenhauStatsmaemail ese akatumirwatweets paminitiTwitteruploadedwhatsappshoko countzvinyorwa zvemashokoYouTube
Maitiro Ekuvaka Ongorora Zvinongedzo zveGoogle, Bing, Yelp, uye Zvimwe…